စမ္းေခ်ာင္းျပည္လမ္း မဟာၿမိဳင္မွတ္တိုင္အနီး ေဇာတိကလမ္း 15...
ပေအကျယ်(13×55) မြေညီထပ် တိုက်ခန်း ညှိနှိုင်း ဈေးဖြင့်ရောင်းမည်။
လိပ်စာ- ဇေယျဝတီလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း...
Ad Number S-10191463
စမ်းချောင်းမြို့နယ် အခန်းကောင်း လေး ရောင်းပါမည် ဇေယျသုခလ...
565 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10191349
Ad Number S-10170071
သီရိ လမ်းစမ်းချောင်းတွင် အလွှာနိမ့်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Ad Number S-10197636
Phone No. To Contact စမ္းေခ်ာင္း အက်ဳိးေဆာင္
Ad Number S-10195870
စမ်းချောင်း #ညောင်တုန်းလမ်း (၁၂ပေခွဲ၅၀) ဒုတိယထပ် (၃)လွာ တိုက်ခန်း အရောင်း
635 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact Myint Zu Realestate Service
Ad Number S-10195733
ရှမ်းလမ်းဂွဈေးအနီးရှိ (၁၂ပေခွဲ၅၀) မြေညီ(ထပ်ခိုးတစ်ဝက်ပါသော) တိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိ...
Ad Number S-10195601
Ad Number S-10195486
စမ်းချောင်း #အာရှတော်ဝင်အနီးတွင် Bcc ကျပြီး (၁၂ပေခွဲ၅၀) ပထမထပ် တိုက်ခန်း (ညှိနှိုင်း)ဖြင့်...
Ad Number S-10195452
စမ်းချောင်းမြို့နယ် နန္ဒဝန်လမ်းရှိ အသင့်နေတိုက်ခန်း ရောင်းမည်။
Ad Number S-10195390
475 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact Nyi Nyi Realestate
Ad Number S-10194048
Nyi Nyi Realestate Close
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ပြင်ဆင်​ပြီးအလွှာနိမ့် အခန်းကောင်းရောင်းမည်(ညှိနှိုင်း)
Ad Number S-10193978